सुन्दर १६ बर्षीया युवती कसरी बनिन् माता ? विद्यालयमा पनि गरिएको छ उनका लागि यस्तो ब्यवस्था (भिडियो हेर्नुस) « Light Nepal
सुन्दर १६ बर्षीया युवती कसरी बनिन् माता ? विद्यालयमा पनि गरिएको छ उनका लागि यस्तो ब्यवस्था (भिडियो हेर्नुस)
Published On :2June, 2019 3:21 pm
काठमाडौं । दाङको तुल्सिपुरमा भेटिईन अचम्मकी युवती । जो विद्यालयमा पनि अलग्गै बस्छिन् । विद्यालयमा शिक्षकले उनलाई छुट्टै बस्ने ब्यवस्था मिलाईदिएका छन् । उनलाई सबैले माता भनेर सम्बोधन गर्छन । १६ वर्षको उमेरमै माता भनेर सम्बोधन गरिने उनी रोजिना खड्का हुन् । उनी अहिले भुत, बर्तमान, भबिष्य बनाउन सक्ने क्षमता आफुमा रहेको बताइन् ।
उनले आफुमा शक्ति आएकाले त्यसै अनुसार गर्ने गरेको बताउँछिन् । आफुजस्तै अन्य साथीहरु खेलेको देख्दा उनलाई पनि खेल्न मन लाग्छ । तर उनको शरिरले सहन्न । देवता लाग्ने भएकाले उनले त्यसो गर्न सक्दिनन् । नियममा बस्छिन् । उनले आफुमा दैवि शक्ति छ भन्ने कुरा अघिल्लो वर्ष लक्ष्मी पुजाको दिनमा देवी चढेको बताउँछिन् । उनले आफुलाई खैरावागंकी देवीले शक्ति दिएको बताइन् ।
बनहरी जाँदा उनले नाग देखेको बताइन् । उनले आफुलाई त्यहाँको देवीले सपनामा बोलाएको बताइन् । कक्षा १२ पढ्दै गरेकी उनले पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन चाहन्छिन् । त्यसैले विद्यालय जान भने छोडेकी छैनन् । विद्यालय गएर उनलाई भागवत गिता र ज्योतिष विद्या पढ्न पनि सजिलो हुने बताइन् ।